နှုတ်ခမ်းခြင်း တေ့ နမ်းကြလေသောအခါ…။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » နှုတ်ခမ်းခြင်း တေ့ နမ်းကြလေသောအခါ…။
နှုတ်ခမ်းခြင်း တေ့ နမ်းကြလေသောအခါ…။
Posted by black chaw on Jun 4, 2013 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing | 102 comments
လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးလလောက်က ရေးထားဖြစ်ခဲ့ပြီး
တင်ချင်စိတ်မရှိလို့ မတင်ဖြစ်ပဲ ထားခဲ့တဲ့ ပို့စ်ကို
အခု အားအားလျားလျား ဖြစ်နေတဲ့အချိန်…၊
ပို့စ် ရေးရမှာလည်း ပျင်းနေတာနဲ့
နည်းနည်း ပြင်ဆင်ခြယ်သ မွမ်းမံပြီး တင်လိုက်တာပါဗျာ…။
မင်းသားနဲ့ မင်းသမီးက သရုပ်ဆောင်တယ်…။
အဲဒီမဆန်းတာတွေကြားကပဲ ဆန်းတာကြီးတစ်ခုက ထွက်ချလာရော ကျောင်းဒကာရေ…။
နှုတ်ခမ်းခြင်းနမ်းတဲ့ အခန်းတစ်ခန်းကို အဲဒီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲမှာ ဒါရိုက်တာက ထည့်မလို့တဲ့…။
မင်းသမီး အဖြစ်သရုပ်ဆောင်မယ့် သက်မွန်မြင့်က အင်္ကျ ီအဝတ်အစားအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ ဆိုပြီး…
ဒါရိုက်တာ လုပ်သူထံက ဇာတ်ညွှန်းတောင်းဖတ်သတဲ့…။
ဇတ်ညွှန်းထဲမှာပါလာတဲ့ ဆင်းန် နံပတ် ၃ရ ကို ဖြုတ်ပေးဖို့ သက်မွန်မြင့်က ဒါရိုက်တာ ဝိုင်းကို တောင်းဆိုတယ်တဲ့…။
ဆင်းန်နံပတ် ၃ရ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး…
ဒါရိုက်တာ ဝိုင်း ဘက်က ပြတ်တယ်…။
ဒီဆင်းန် မပါရင် ဒီကားက အရင်ကားတွေအတိုင်းပဲ ဖြစ်သွားမယ်…
Ending မှာလည်းချိတ်ထားတာဆိုတော့ မဖြုတ်ပေးနိုင်ဘူး…
လုပ်ကြပေါ့ ရှင်တို့က ရဲတွေကိုး…။
မင်းသမီး သက်မွန်မြင့် ကျတော့ တစ်မျိုး…။
သူ့ဘက်ကလည်း ဆင်ခြေက ခိုင်မာနေပြန်ရော…။
သက်မွန်က ပါးနမ်းတဲ့ အခန်းထိ ရိုက်ပေးမယ်…
ကျန်တဲ့ နှုတ်ခမ်းခြင်းနမ်းပြီး လျှာသပ်တာ…
ကောင်လေးအင်္ကျ ီကို ဆွဲဖြဲပြီး နှလုံးသားနေရာကို နမ်းတာ…
ပါးနမ်းတယ်ဆိုတာကလည်း ကောင်မလေးက ပါးရိုက်ခဲ့လို့ ကောင်လေးက နာကြည်းချက်နဲ့ ပြန်နမ်းခိုင်းတာ
Ending မှာချိတ်ထားတာလည်း နှဖူးပဲနမ်းတာဆိုတော့ ဒါတွေကို လျှော့ပေးဖို့ ပြောတာပါ…။
ဆင်ဆာလွတ်လပ်ခွင့်ရတယ်ဆိုပေမယ့် သက်မွန်အနေနဲ့ ဒါမျိုးတွေ ရိုက်ဖို့တော့ မသင့်တော်ဘူးထင်ပါတယ်…။
ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာ ရှိသေးတယ်လေ…။
သက်မွန်ရဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း အဲဒါမျိုးတော့ လက်မခံဘူးထင်ပါတယ်…။
နောက်…ထားသခင် ရဲ့ စရိုက်ကလည်း ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူး ထင်ပါတယ်…။
အဲဒီအတွက် ဒီဆင်းန်ကို ညှိပေးဖို့ တောင်းဆိုတာ…။
ဒါသည် ဇာတ်လမ်းကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်တာ မဟုတ်ဘူး…။
ဒီဇာတ်ကားကို သရုပ်ဆောင်မယ့် မင်းသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ညှိနှိုင်းတာ…။
သူပြောသလို ဒါရိုက်တာခိုင်းတာပဲ လုပ်ရမယ်ဆိုတာ ဒီမင်းသမီးက ဒီသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်က သူ့ရဲ့
ဒီဇာတ်ကားပေါ်မှာ ခံစားချက်…၊ သူ့ရဲ့ ရပ်တည်မှု…၊ အဲဒါတွေတော့ ရှိသေးတယ်လေ…။
ဟုတ်တယ်…။ ပြောပြလိုက်စမ်းပါ သက်မွန်လေး…။ မင်းလေး မှန်ပါတယ်…။
စာရေးဆရာမ ပုညခင် က သူမရဲ့ မူရင်းဝတ္ထုမှာ မပါပဲ ဝိုင်းက ထပ်ဖြည့်ထားတဲ့ နမ်းတဲ့အခန်းလေး ဖြုတ်ပေးပါ လို့
ပြောထားတာလေးကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ သိထားသင့်ပါတယ်…။
စာရေးဆရာမရဲ့ အပြောကို ဒါရိုက်တာဝိုင်းက နံနက်ခင်း ဂျာနယ် အင်တာဗျူးမှာ အခုလို ပြန်ဖြေရှင်းသွားပါတယ်ဗျာ…။
ကျွန်တော် ဒီအတိုင်းပဲ ဆက်ရိုက်မယ်…၊ ကားထွက်လာပြီး ပရိသတ်က ဝေဖန်တယ်ဆိုလည်း ခံမယ်…၊
အမှားကို လက်ခံပေးပါမယ်…၊ သို့သော်လည်း စာရေးဆရာမဆိုတာ ဝတ္ထုပဲရေးတတ်တာ..၊ ရုပ်ရှင်မရိုက်တတ်ပါဘူး…။
မင်းသမီးဆိုတာလည်း သရုပ်ဆောင်ပဲ တတ်တာ…၊ ဇာတ်ညွှန်းမရေးတတ်ဘူး…၊ ဒါရိုက်တာ မလုပ်တတ်ဘူး…၊ ဒီဘက်ပိုင်း လုပ်ရမယ့်ကိစ္စကျတော့ အားလုံးတတ်ရပါတယ်…၊ အဲဒီအတွက် လျှော့ဖို့ အစီအစဉ်မရှိပါဘူး…။
အာဒမ်၊ ဧဝ၊ ဒသ ဝတ္ထုလည်း ဒီဆရာမရေးတာပါပဲ…၊ ကျွန်တော်အများကြီးပြင်ရိုက်…ထည့်ရိုက်တာတွေဟာ ကျွန်တော့် ဖန်တီးမှုဖြစ်ပါတယ်…။ ဝတ္ထုဆိုတာ ဈေးက ဝယ်လာတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်သားငါးနဲ့ တူပြီး ဒါရိုက်တာက စားဖိုမှူး နဲ့တူပါတယ်…။ ဟင်းကောင်းအောင်ချက်ရမှာ ကျွန်တော့်တာဝန်ပါ…။
နေစမ်းပါဦး ကိုဝိုင်း ရယ်…။
နှုတ်ခမ်းခြင်း တေ့နမ်းပါ့မယ် ဆိုဦးတော့…ပြေတီဦးကြီးကလည်း
နမ်းပါ့မယ်ဆိုဦးတော့…။ ပြေတီဦးကတော် ဒေါ်အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကြီးကရော ကြည်ကြည်ဖြူဖြူနဲ့…
အခုအချိန်မှာ အဲဒီဇာတ်ကားကို မင်းသမီးပြောင်းပြီး ဖွေးဖွေးနဲ့ ရိုက်နေပြီ ဆိုလား …
မင်းသားကလည်း နေတိုး ဆိုလား…
တေ့နမ်းကြမယ့် နှုတ်ခမ်းတွေပြောင်းပစ်လိုက်တဲ့ သဘောပေါ့…။ အာဟိ…။
သက်မွန်မြင့် နှုတ်ခမ်းနဲ့ ဖွေးဖွေး နှုတ်ခမ်းအဝေးကြီးပါ…။
နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို ဘလက်ကြီး နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့
ချစ်ခင်လေးစားတဲ့ အနမ်းဆရာ ဘလက်…။
သက်မွန်မြင့်နဲ ့စိုင်းစိုင်းကတော့ ရင်းနှီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းမနည်းတဲ့အပြင် တကယ့်မောင်နှမရင်းချာတွေ လိုနေလာသူတွေဆိုတော့ မတော်ရာကိုင်တယ်လို ့တွေးမိပုံမပေါ်ဘူးထင်တာပဲ.. စိုင်းစိုင်းက သူပိန်ပေမယ့်ဗလကောင်းကြောင်းကြွားချင်တာကို သက်မွန်မြင့်က ပါရမီဖြည့်ပေးရတာပါ။ :harr:
ရွှေမှုံရတီလေးကို ချစ်ဖို ့ကောင်းလို ့သတိထားမိပေမယ့် ..မြန်မာကားကြည့်လေ့မရှိလို့မကြည့်ရသေးဘူး.. ဒီပိတ်ရက်မှ ၂ခွေလုံးငှားကြည့်လိုက်အုန်းမယ်..
တိန်… လာပြန်ပဟဲ့ ဆိုင်းဆိုင်းဖမ်းကိုင် ချစ်သူတစ်ယောက်…
ခရစ်(စ) လေးကို ပိုချစ်သွားဘီကွယ်။
ဒါကို ညှစ် မဒဲ့လား အဲ့ဒါ ညှစ်မဒဲ့လား ဒါများ ညှစ်မဒဲ့လားကွယ် ပြန်ပြောဦး… (ပြောဇမ်း)
ဒါဟာ ညှစ် သဒဲ့လား ..အဲ့ဒါ ညှစ်သဒဲ့လား ဒါများ ညှစ်မဒဲ့လားကွယ် ..မင်းပဲပြော…
နိရဲ့ ချာ ဂျီး အညှစ် မခံရလို့ ဒီ လို မနာလို ဖစ်နေသလား။
ရန်တူ ဂျီး တစ်ယောက်လို ထင်နေဘီရား:::::::
@ Miss Crystalline ;
ကွန်းမန့်လေး ဝင်ချီးမြှင့်ပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါ Miss..။
ဦးဘလက်ကြီး အဲဒီလောက်လေးတွေနဲ့တော့ သွေးတိုးတော့ဘူးဗျ…။
ဒီဇာတ်လမ်းအဖြစ်အပျက်လေးကို ဝေဖန်ကြည့်ပြန်ရင်တော့ ကွန်ဆာဗေးတစ်ကြီးဖြစ်ဦးမယ်ပေါ့နော်…………. မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု မြန်မာ့ဓလေ့အရဆိုလျှင်တော့ ဒီလိုဇာတ်ဝင်ခန်းမျိုးဟာ မြန်မာဇာတ်ကားမှာ မပါဝင်သင့်ဘူးလို့မြင်မိပါတယ်……. ဒါရိုက်တာဝိုင်းပြောတဲ့ ဒီအခွံကြီးထဲပြန်ဝင်မယ်ဆိုတာကတော့ လုံးဝအလွဲကြီးပါ…… ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီအနမ်းခန်းလေးမပါပဲ အောင်မြင်ကျော်ကြားလူကြိုက်များနေတဲ့ ဇာတ်ကားများကလဲ အများသားလား…… အရင်ခေတ်ကလို လူဆိုးကြီး ချွေးသံရွှဲရွှဲ မျက်နှာကြီးအဆီတဝင်းဝင်းနဲ့ မင်းသမီးအခန်းထဲက ပြန်ထွက်လာတာတို့၊ သမင်လေးကို ကျားလိုက်နေတာတို့၊ အခန်းရှေ့က ပန်းအိုးတွေကျကွဲတာတို့ ဟိဟိ ဒါမျိုးတွေနဲ့ အသားကျနေကြတာရယ်လေ….. ခုတော့ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ရတာနဲ့ ဒီလိုအနမ်းစူးစူးကြီးတွေပါထည့်သွင်းကြတော့မယ်….. ဟော ဟိုတလောက အဖြစ်ပျက်လေးလဲအားလုံးသိကြရောပေါ့….. ကိုးတန်းကျောင်းသူလေးကိစ္စလေ ဟေဟေ့
အနော်တို့ မြန်မာလူမျိုးများမှာ အများညီရင် ဤ က ကျွဲ ဖြစ်ပါတယ်…. ဆိုလိုရင်းက အများလက်ခံမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီလိုဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်ကို ”ကျွဲ” လုပ်လိုက်ပေါ့ဗျာ…….
သင့်ကြောင့် ဘာသာ/သာသနာ/လူမျိုး မညှိုးနွမ်းပါစေနှင့်
ဆိုတော့ ကျောင်းဒကာ အူးလေးအူးဘလက်ရေ မင်းသားနေရာရလျှင်ဖြင့် သရုပ်ဆောင်လိုကြောင်း
ယခုခေတ်ပေါ်မော်ဒယ်များနှင့် နှုတ်ခမ်းခြင်းဆိုလျှင်တော့ မည်သူ့ကိုမျှ ငြင်းဆိုမည်မဟုတ်ကြောင်း
@ Thuyazaw ;
တကူးတက ဝင်လာပြီး ကွန်းမန့်လေးရေးပေးသွားတာ
ဝိုင်းက သူတကယ် အဲလိုမရိုက်ပါဘူးတဲ့
နှုတ်ခမ်းချင်းမတေ့ဘဲ နဖူးလေးသာ နမ်းချင်နမ်းခိုင်းမယ် ဂျောတာဂျ
@ Yin Nyine Nway ;
ဦးဘလက်က နံနက်ခင်းထဲက အင်တာဗျူးတွေကိုဖတ်ပြီး
တကယ် ရ ရင် တကယ် လုပ်မဲ့
မိုက်ကယ်‌ဒေါက်ဘလက် ရဲ့ပို ့စ် ကို
‌ခေတ် မမီ မှာ စိုး လို့ဝင်‌ရောက် အား‌ပေးသွားပါတယ်
ခေမီသူတိုင်း နှုတ်ခမ်းခြင်းတေ့ နမ်းကြသည် ပေါ့ကွယ်…။
အဲဒီဇာတ်ကား ထွက်လာဘီလား လေးလေး။ သက်မွန်မြင့်ကတော့ မနမ်းခဲ့ပေမဲ့ နမ်းတဲ့လူကတော့ နမ်းမှာပေါ့နော်..။
အခုတစ်လော အနမ်းဇာတ်လမ်းတွေအကြောင်း တော်တော်လေးကြာရဗျ…။
@ အာဂ ;
ဗမာ ကားတွေကြမ်းချက်ကတော့ လက်ကုန်ပဲ
လူမင်း ဆိုလည်းဖက်ချက်က ကမ်းကုန်
မင်းသမီးက အိပ်ရာခင်းကိုလက်နဲ့ခြစ်နေတုန်းဘာဖြစ်နေတာလည်းကြည့်နေတာနေမင်း ဆိုတဲ့ငနဲကလည်း စောင်ခြားထဲကထွက်လာ ဘာတွေလဲ
စိုးမြတ်သူဇာကြီး နဲ့နေတိုးကလည်း ခုတင်ပေါ်မှာ သရုပ်ဆောင်ကောင်းချက်ကတော့ လန်ထွက်နေတာပဲ
ခွေနာမည်တွေတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး ကြည့်ချင်ရင်တော့ ဆက်လက်စုံစမ်းကြည့်ရှုကြကုန်လော့……..
@ cobra ;
လေး ဘလက်က သိပ်မကြည့်ချင်ရှာဘူးနော်… ဟီးးဟီးးး
“မျက်လုံးလေး ကလယ်ကလယ်” ဆိုတဲ့အခွေကိုငှားကြည့်
စိုးမြတ်သူဇာ နဲ ့နေတိုးတို့ဘယ်လိုတွေသရုပ်ဆောင်လဲဆိုတာတွေ ့လိမ့်မယ်
လွန်ခဲ့တဲ့ ၅လလောက်ကသာတင်ရင် ပွဲဆူမှာဒဂယ်ကျောတာ….
ဘတ်… သို့သော်…. ဒါပေမယ့်………… ဂျားထဲမှာ မျက်လုံးလေးလကယ်လကယ် @_@ ဖြစ်သွားတော့
ဦးဘလက်ရဲ ့အနမ်းတွေ မှိုတက်တွားဘီကွီ………. ချိတ်မကောင်းဘာဝူး ဂျာ……….